Kooxda Barcelona oo kulanka caawa ee Champions League si gaar ah u daawan doonta saddex xiddig oo ka tirsan Inter Milan – Gool FM
Kooxda Barcelona oo kulanka caawa ee Champions League si gaar ah u daawan doonta saddex xiddig oo ka tirsan Inter Milan
Haaruun October 2, 2019
(Barcelona) 02 Okt 2019. Kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa la soo warinayaa inay si gaar ah u daawanayso saddex xiddig oo ka tirsan Inter Milan kulanka caawa ee Champions League.
Wararku waxa ay sheegayaan in kooxda Barcelona ay daawanayso saddex ciyaaryahan oo ka tirsan naadiga Inter Milan ee dalka Talyaaniga kulanka heerka Guruubyada ee Champions League oo ka dhacaya caawa garoonka Camp Nou.
Warsidaha Talyaaniga ah ee Calcio Mercato ayaa warinaya in kooxda xafidanaysa horyaalka Spain ay xiiseynayso inay suuqa bisha Janaayo la soo wareegto xiddigo ka mid ah Inter Milan sidaas darteed ay caawa si gaar ah u daawan doonto saddexda ciyaaryahan ee ay xiiseynayso ee kala ah Stefano Sensi, Milan Skriniar iyo Lautaro Martinez.
Si kastaba ha ahaatee, macallinka Inter Milan ee Antonio Conte ayay u badan tahay inuu ka hor’imaan doono bixitaan kasta oo ay xiddigihiisa ku aadayaan dalka Spain, maadaama kooxdiisa hadafkeedu yahay inay Juventus ku garaacaan horyaalka Serie A oo ay qaadistiisa u baratay.
Waa kee Tababaraha baranaya luqadda Ingiriiska si uu macallin ugu noqdo Kooxda Manchester United?